Meteo Malagasy: mifamatotra amin’ny sehatra maro ny toetr’andro | NewsMada
Meteo Malagasy: mifamatotra amin’ny sehatra maro ny toetr’andro
Mifototra amin’ny sehatra isan-karazeany ny asa famantarana ny toetry ny andro raha ny fanazavan’ny mpiasan’ny Meteo malagasy. Tafiditra ao anatin’ny fikambanambe maneran-tany mahakasika ny toetry ny andro ny Meteo malagasy izay manana ny foiben-toerany any Génève.
Araka izany, mandray anjara amin’ireo asa mifandraika amin’ny toetry ny andro sy rano ary ny toetrandro izay volavolain’ity fikambanana ity. Anisan’ny asan’ny mpamantatra ny toetry ny andro voalohany indrindra ny manombana na maminavina ny toetry ny andro sy ny toetrandro ary ny resaka rano.
Rehefa vita izany, manaparitaka ny vaovao izy ireo ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany.
Mandinika ireo tranga mifandraika amin’ny fiovaovana sy fiovan’ny toetrandro ihany koa, hampihenana ny tranga ratsy izay manimba ny tontolo iainana sy ny fiainana andavanandro.
Mifamatotra akaiky amin’ny fahasalamana, ny fambolena ary ny fiarovana ara-tsakafo ny resaka toetr’andro. Anisan’ny andraikitry ny mpikarotra momba ny toetry ny andro ihany koa ny manoro ireo manam-pahaizana mahakasika ny ara-pahasalamana mba hialana amin’ny mety ho fihanaky ny aretina entin’ny rivotra sy ny bibikely. Manoro ny tantsaha ihany koa izy ireo mba hanatsarana ny fambolena.
Mifandraika amin’ny fiarovana ny tontolo iainana koa ny vinan’ny toetry ny andro. Ao no handalinana ny fepetra rehetra ho fiarovana ny harena voajanahary. Manara-maso, manombana ary maminavina ny fiovana loharanon-karena mety ho entin’ny rano ihany koa.
Raha amin’ny sehatra fitaterana indray, manome vaovao momba ny toetry ny andro ho an’ireo mpampiasa ranomasina sy ireo mpitatitra anabakabaka ary an-tanety ihany koa izy ireo hisorohana ny loza mety hitranga.
Efa misy ny rindram-baiko izay manangona ny sarin’ny zanabolana sy ny radara. Ny modely ao anaty solosaina no manambatra izany ho vaovao azo tsapain-tanana.